Ny fironana Netflix dia tonga amin'ny lalao video miaraka amin'i Utomik | Famoronana an-tserasera
Jose Angel | | General, Inspiration
Raha nametraka fironana i Netflix amin'ny fomba fijerena sinema ankehitriny, tsy kisendrasendra fa lalao video izao. Ary fantatsika rehetra ny sehatra Netflix anio. Tsy manam-petra ny sarimihetsika ary andiana atiny sy fividianana voalohany. Ny famokarana toy ny sarimihetsika 'Bright' na horonan-tsary hafa. Scorsese, Tarantino, Nolan… Ireo talen'ny sarimihetsika tsara indrindra dia manana ny toerany ao aminy. Ary avy any, HBO, Movistar plus, sns. Iza no hanatona an'i Utomik?
Utomik dia naka an'io fironana io ary nitondra azy tany amin'ny taniny. Raha toa ka anisan'ny mpanjakavavin'ny zavakanto fahafito i Netflix dia mody atao amin'ny lalao video i Utomik. Sehatra iray ahafahanao 'manofa' lalao video tsy misy fetra hilalaovana azy ireo amin'ny alàlan'ny famandrihana isam-bolana. Toa mitarika amin'ny famongorana lalao amin'ny endrika ara-batana izany. Manofa ny lalao video ary milalaova mandra-leo anao, satria 'afaho'indray ary misintona hafa.
1 Inona ny Utomik?
2 Ahoana no fiasan'ny Utomik?
3 Avy any Batman ka hatrany amin'ny Metro 2033
Inona ny Utomik?
Nivoatra tamin'ny fanombohana tsy miankina izahay ary tsy nisy ny fanohanan'ny indostria hatramin'ny fananana famakiamboky lalao mihoatra ny 750 sy mpiara-miasa amin'ny famoahana maherin'ny 100 tao anatin'ny 2 taona monja. Anisan'izany fanohanana izany ny lalao Warner Bros., Disney, SEGA, THQ Nordic, Epic Games, Curve Digital, IO Interactive, ary maro hafa. Mihoatra noho ny sehatra filokana famandrihana hafa izany ary eo am-piandohana fotsiny.
Natsangana tamin'ny taona 2014 ny vondron'olona mpilalao holandey ary ny taona 2016 dia navoaka ny kinova beta voalohany. Miaraka amin'ny fanekena iraisampirenena kely hatreto dia mamoaka ny kinova farany izy ary vita soa aman-tsara.
"Rehefa natomboka tamin'ny fomba ofisialy isika ankehitriny, ny mpampiasa dia mahazo fidirana tsy voafetra milalao lalao maherin'ny 750 $ 6.99 isam-bolana * na $ 9.99 isam-bolana ho an'ny drafi-pianakaviana ho an'ny efatra. Ity famotsorana ity dia hisy koa famolavolana mpanjifa vaovao sy nohatsaraina. "
Miaraka amin'ny famoahana lalao maherin'ny 750 dia mora ny mamorona kajy ao an-dohanao, hahafantarana ny tombom-bidin'ilay tetikasa. Raha miakatra hatramin'ny € 80 ny lalao voalohany, ny tombony amin'ny € 6,99 na € 9,99 isam-bolana eo anelanelan'ny olona efatra dia hahazo tombony bebe kokoa. Ary avy any an-trano daholo ary tsy miandry. Ao koa ny fanaraha-maso ny ray aman-dreny ho an'ny ankizy kely.
Ahoana no fiasan'ny Utomik?
Amin'izao fotoana izao, ny katalaogin'i Utomik dia manana lalao 765 avy amina orinasa 50 malaza. Avy any Warner mankany Disney amin'ny alàlan'ny orinasa malaza hafa toa ny SEGA, Talltale Games na THQ, ankoatry ny hafa. Katalaogy iray mitombo eo amin'ny 15 na 20 eo ho eo ny lalao video isam-bolana, araka ny voalazan'ny orinasa ao amin'ny tranonkalany.
Ny zava-dehibe dia ny fisintomana. Androany, avy amin'ny fivarotana avy amin'ny console lalao na ny sehatra aza Steam Ho an'ny PC, sarotra ny mividy lalao amin'ny Internet ary misintona izany. Mampanantena i Utomik fa tsy izany no izy.
Rehefa misintona lalao video dia tsy maintsy miandry fotoana farafahakeliny ianao amin'ny famoahana ireo atiny ilaina amin'ny fanombohany. Raha vantany vao vita io enta-mavesatra io, izay mety 20% amin'ny lalao video manontolo, dia afaka manomboka milalao ianao. Raha milalao ianao, ny ambiny dia alaina ao aoriana. Tsy hisy fiatraikany amin'ny traikefa amin'ny lalao izany. Amin'izany fomba izany dia hanome bonus ho an'ireo mpilalao maniry indrindra hilalao.
Avy any Batman ka hatrany amin'ny Metro 2033
Na eo aza ny zava-misy fa nandritra ny roa taona lasa dia orinasa maro no nanangana serivisy mitovy amin'izany, toy ny tranga PlayStation Ankehitriny, misy fanantenana lehibe apetraka amin'ity sehatra ity, izay mikendry ny ho lasa 'Netflix an'ny lalao video' taorian'ny fifanarahana nifanaovana tamin'ireo orinasa zato mahery nandritra ny dingana beta an'ny serivisy.
Amin'izao fotoana izao dia tsy manana anarana fantatra toy izany izy. Ny franchise Fifa na Call of duty dia tsy manana banga ary ny famoahana misy dia manam-potoana bebe kokoa. Saingy amin'ny fitomboany sy ny fiaraha-miasan'izy ireo amin'ireo orinasa toa an'i Disney, Warner, SEGA, tsy ho ela ny fiandrasana rehefa manatevin-daharana azy ireo ireo franchise ireo.
Ho an'ireo izay efa ao amin'ny kinova BETA ho mpiara-dia mahatoky amin'ny orinasa dia hitovy ny vidin'izy ireo. Mijery toy izao amin'ny € 5,99. Mandritra ny fotoana rehetra nisoratana anarana, tsy misy fetra ny taona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Ny fironana Netflix dia tonga amin'ny lalao video miaraka amin'i Utomik
Ny fanambin'ny logo 365 an'ny mpamorona iray izay mitazona ny dikany hatrany amin'ny typografia azy ireo